पद बचाउने कि छवि? :: देवप्रकाश त्रिपाठी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२४ श्रावण २०७७, शनिबार १४:०४ English
पद बचाउने कि छवि? :: देवप्रकाश त्रिपाठी
जीवन बित्दै जाँदा मानिसको छवि विकास र विस्तार हुँदै जान्छ र निश्चित काखलण्डमा त्यही छवि व्यक्तिको पहिचान बन्न पुग्छ। कर्म, व्यवहार र क्षमताले व्यक्तिको पहिचान निर्माण हुन्छ र वास्तवमा त्यही नै उसको छवि हुनजान्छ। ‘डाँकु’ भन्नेबित्तिकै हामीभित्र एकप्रकारको भावाकृति तयार हुन्छ भने सन्तको स्मरण गर्दा अर्कै। अनि जसको छवि जुन प्रकारले बनेको हुन्छ त्यसअनुरूपको व्यवहार मात्र शोभनीय एवम् सहज मानिन्छ। कुनै विजय गच्छदार या त्यस्तै कोटिका कसैले विगतमा गरेको (कु)कार्यप्रति पश्चात्ताप गर्दै सन्त बनेर देवघाटमा बाँकी जीवन गुजार्न पुगे भने पनि तिनलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिन्छ र भनिन्छ– कुन लाभ लिनका लागि यी यहाँ आएका होलान्? छविकै कारण यसरी शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। एउटा राजनीतिकर्मी, पत्रकार, चिकित्सक या प्राध्यापक पहिचानका व्यक्ति रङ्गीचङ्गी पहिरन, कानमा कुण्डल र लामा–लामा कपालसहित प्रस्तुत हुनुलाई समाजले स्वाभाविक रूपमा लिन खोज्दैन। तर, त्यस्तै भेषभुषामा कुनै रङ्गमञ्च या सिने कलाकार देखिए भने त्यसलाई अस्वाभाविक ठानिँदैन। त्यस्तै कुनै माओवादी, क्रान्तिकारी, उग्रवादी या आतङ्ककारी छविका मानिसले गुडिरहेको बसमा आगजनी गरे, सार्वजनिक या निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याओउने काम गरे या अभद्र र अवाञ्छित व्यवहार प्रकट गरे भने नाजायज भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, कुनै साधु, सन्त, विद्वान्, ज्ञानी, गुणी या सकारात्मक छविका कसैले पनि त्यसप्रकारको व्यवहार प्रस्तुत गरेमा कसैले पनि सहज मान्न सक्दैन। स्थापित छविभन्दा पृथक व्यवहार भएमा व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोण मात्र बदलिँदैन, असहज परिस्थितिको सिर्जना पनि गर्न सक्छ। त्यसैले एउटा मानिसका निम्ति छवि बनाउनु जति कठिन कार्य हो, छवि जोगाउनु त्योभन्दा कठिन हुनसक्छ। छविअनुरूपको व्यवहार गर्न सक्नेले मात्र आफ्नो प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न सक्दछन्।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एक निष्ठावान, इमानदार, देशभक्त, सिद्धान्तनिष्ठ, त्यागी र साधारण जीवनशैलीमै सन्तुष्ट व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ। पदमोहविहीन नेता मानिनुहुने कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, जनता र देशको हितमा केही न केही काम हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो र जनताले उहाँबाट अपेक्षा राखेका पनि छन्। राज्य सञ्चालनमा अनुभवको कमी भए पनि जानाजान मुलुकलाई क्षति पुग्ने काम उहाँबाट हुनेछैन भन्ने विश्वास गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछिको दुई साताभित्र सुशील कोइरालाको कार्यव्यवहारले उहाँको छविमा क्षति पुग्ने चिन्ता बढाएको छ। नेकपा–एमालेसँग ‘हुँदै नभएको सम्झौता’ कार्यान्वयन नगर्न उहाँले लिनुभएको ‘दृढ’ अडानले पार्टीको कार्यकर्ता, समर्थक एवम् शुभचिन्तकहरूमा उहाँप्रतिको भरोसा बढाएको थियो। स्वच्छ छविको सरकारमा ‘मैलो’ छविका व्यक्तिको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने सोचका रूपमा उहाँको अडानलाई लिइएको थियो। नेकपा एमालेले होइन वामदेव गौतमले गृह मन्त्रालय पाउने कुराले केहीलाई प्रसन्न तुल्याए पनि धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेका थिएनन्। दुई साताको घम्साघम्सीपश्चात् सुशील कोइराला वामदेवलाई गृहमन्त्री बनाउन राजी भएपछि ‘केका लागि’ भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। गृह मन्त्रालय प्रकरण प्रारम्भमा जुनसुकै कारणले विवादमा आएको भए पनि तनाव बढ्दै जाँदा यो पार्टीका नेता र पार्टी-पार्टीबीच इगोको विषय त बनेकै थियो, प्रधानमन्त्री कोइरालाको पहिलो परीक्षाका रूपमा पनि यसलाई लिइयो। सुशील कोइराला आफ्नो छविप्रति बढी संवेदनशील हुनुहोला या पदरक्षाको भावनाले उहाँलाई अभिपे्ररित गर्ला भन्ने विषयमा आमनेपालीले गहन चासो राखेका थिए। अन्ततः कोइरालाको निर्णय पदरक्षाकै पक्षमा भयो, यसले वामदेवका हिमायती र सुशील कोइरालाका आलोचकहरूलाई मात्र खुशी तुल्याएको छ। ‘गृह′लाई लिएर तनाव बढ्दै जाँदा भारतमा अरविन्द केजरीवालले झैं सुशीलले पनि पदत्याग गर्नुहुन्छ, उहाँले सम्झौताचाहिँ गर्नुहुने छैन भनी विश्वस्त रहेकालाई यस घटनाले निराश तुल्याइदिएको छ। यो प्रकरणले सुशील कोइराला आफ्नै छविभन्दा पदसँग पे्रम गर्न उत्पे्ररित रहनुभएको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ, जुन उहाँको छविअनुकूल मान्न सकिन्न। यस्ता विवाद या तनावमा शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद या त्यस्तै अन्य कोहीले यसरी सम्झौता गरेका भए त्यति अस्वाभाविक र असहज मान्नुपर्दैनथ्यो, जति अहिले मानिएको छ। सुशील कोइराला पदका लागि कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने जुन विश्वास आममानिसमा थियो, उहाँप्रतिको उक्त विश्वास डगमगाउने स्थिति बनेको छ। आमप्रजातन्त्रपे्रमीले यस घटनाबाट ‘डिमरलाइज्ड’ महसुस गरेका छन्। यदि कोइराला वामदेवसँग सम्झौता नगरी पदबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगनुभएको भए त्यसले उहाँको छविरक्षा त हुने थियो नै, प्रजातन्त्रपे्रमीहरूले गौरवान्भूति गर्ने अवस्था पनि बन्न सक्थ्यो। वामदेव गौतमले आफूलाई सच्याउने र विगतमा उहाँले दर्शाउनुभएकोभन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने सम्भावना नरहेको होइन। तर, त्यसको जानकारीका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। पृष्ठभूमिका आधारमा मात्र धारणा बनाउने हो भने स्वच्छ छविका नेताले, स्वच्छ ढङ्गले सरकार चलाउन चाहेको अवस्थामा वामदेवको सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन। यद्यपि वामदेवलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिएकै कारणले मात्र सुशील कोइरालाको छवि मैलिएको निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने छैन। राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सरकार क्रियाशील भइसकेपछिका दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने टक्कर र तनावका बेला कोइरालाले केलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुने हो त्यस आधारमा मात्र उहाँबारे निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुनेछ। एउटा घटनामा चुकेकै कारण हरेक घटना–सन्दर्भमा कोइराला चुक्नुहुने ठहर गर्न सकिँदैन। सुशील कोइरालाबाट राष्ट्र र जनताका पक्षमा कुनै जोखिमपूर्ण निर्णय हुनसक्ने विश्वास गरिएको छैन, तर उहाँले आफ्नो छविअनुरूपको कर्म मात्र गर्न सक्नुभयो भने पनि त्यसको लाभ मुलुकलाई पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।
१५ फाल्गुन २०७०, बिहीबार ०१:०३ मा प्रकाशित